Eyona ndlela yokuthenga iBitcoin ngeKhadi leDebit ngoMeyi 2022 - Funda iiRhwebo ezi-2
Indlela yokuthenga i-Bitcoin ngeKhadi leDebit-Funda isiKhokelo soRhwebo sesi-2 ngo-2022
Ngexesha leminyaka yokuqala yobukho beBitcoin, bekungenakwenzeka ukwenza utyalo-mali kwimali yedijithali ngemali yangempela yehlabathi. Nangona bekukho iiplatifti ze-intanethi ezikuvumela ukuba ufake imali kwi-akhawunti yebhanki, inkqubo yotyalo-mali yokuphela konyaka ibidla ngokuthatha inani leeveki.
Ukukhawuleza ukuya kwi-2022 kwaye ngoku kulula kakhulu ukuthenga i-Bitcoin ngekhadi le-debit. Ngapha koko, kukho inqwaba yamaqonga asebenzela abathengi base-UK, amanye awo alawulwa yi FCA.
Kwesi sikhokelo, sichaza ii-ins kunye nokuphuma kwendlela onokuthenga ngayo i-Bitcoin ngekhadi ledebhithi lemihla ngemihla. Ngokubaluleka, siphonononga into ekufuneka uyijongile ngaphambi kokusebenzisa umrhwebi omtsha, utshintshiselwano, okanye amaqonga orhwebo- njengommiselo, iifizi kunye nokurhoxa.
Phawula: Njengoko sisombulula kwesi sikhokelo, kufuneka ucinge malunga neenjongo zakho zotyalo-mali ngaphambi kokuthenga i-Bitcoin. Umzekelo, ngelixa abanye abarhwebi bafaneleka kakhulu utyalo-mali lwexesha elide, abanye baluncedo ngakumbi kubarhwebi bemihla ngemihla.
Thenga i-Bitcoin ngeKhadi lokuTsala kwimizuzu emi-5
Awunalo ixesha lokufunda isikhokelo esinzulu ngokupheleleyo? Ukuba kunjalo, landela amanyathelo okhawulezileyo omlilo achazwe ngezantsi ukuze uthenge iBitcoin ngekhadi ledebhithi ngoku.
➖ Inyathelo 1: Vula iakhawunti ngexabiso lethu eliphezulu Umthengisi weBitcoin - I-Crystal Rocket.
➖ Inyathelo 2: Qinisekisa ubuwena ngokufaka ikopi yesazisi sakho.
➖ Inyathelo 3: Faka iinkcukacha zekhadi ledebhithi kunye nesixa sediphozithi.
➖ Inyathelo 4: Yiya kwi urhwebo Bitcoin iphepha kwaye ubeke iodolo yokuthenga.
➖ Inyathelo 5: Gcina i-Bitcoin yakho kwi-broker de ube ulungele ukuthengisa.
Ukuthenga iBitcoin ngeKhadi leDebit-iZiseko
Ukuba umtsha kwihlabathi elingaqhelekanga nelimangalisayo le-cryptocurrencies, kungcono ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela inkqubo yotyalo-mali esebenza ngayo ngaphambi kokuba nohlukane nemali yakho. Okokuqala nokuphambili, ukuze uthenge i-Bitcoin ngekhadi le-debit, kuya kufuneka usebenzise iqonga lesithathu. Oku kunokuba yingcali yotshintshiselwano lwe-cryptocurrency okanye a CFD umrhwebi.
Iqonga olikhethayo liya kuxhomekeka kuhlobo lotyalo-mali onqwenela ukulwenza. Umzekelo, ukuba ujonge ukuthenga i-Bitcoin ukuze ukwazi ukuyithengisa kunye nezinye i-cryptocurrensets ezinje Ethereum okanye Ripple, ke kuya kuba ngcono ukusebenzisa exchange cryptocurrency.
Kungenxa yokuba uya kuba nakho ukuthengisa i-Bitcoin kunye namakhulu ezinye iingqekembe ngeqonga elinye. Nangona kunjalo, uninzi lwamaqonga asebenza ngendlela engalawulwa, ke nyathela ngononophelo. Kwelinye icala lesiphelo, ukuba ujonge ukuthenga iBitcoin ngeqonga elomeleleyo, elilawulwayo, singacebisa ukusebenzisa i-broker ekwi-Intanethi.
Ngokwenza njalo, ayisiyiyo kuphela ukuba noxolo lwengqondo ukuba Umthengisi weemali zedijithali ilawulwa, kodwa iifizi zihlala ziphantsi kakhulu. Ngaphezu koko, uya kuba nenketho yokunciphisa i-Bitcoin (ucinga ukuba iya kuhamba phantsi Ngexabiso) kunye nokusebenzisa amandla (ukutyala imali ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho).
Iinkonzo kunye neengozi zokusebenzisa iKhadi leDebit ukuthenga iBitcoin
Yenza idiphozithi yakho ifakwe kwiakhawunti yakho ngoko nangoko.
Khetha kwiVisa, Visa Electron, MasterCard, okanye Maestro.
Amanye amaqonga awahlawulisi nayiphi na imali yediphozithi yekhadi.
Abo bamkela amakhadi ebhanki kufuneka babe nelayisensi.
Yirhoxise imali kwikhadi lakho lokubambisa xa ukhupha imali.
Abathengisi abakumgangatho ophezulu basebenzisa i-SSL encryption ukugcina iinkcukacha zekhadi lakho zikhuselekile.
Uninzi lweebroker ezilawulwayo ongakhetha kuzo.
Imida iphantsi xa kuthelekiswa nokudluliselwa kwebhanki.
Kuya kufuneka uqale uqinisekise ubuwena.
I-AMEX ayifane ixhaswe.
Imirhumo yokuthenga iBitcoin ngeKhadi lokuTsala
Ngaphambi kokuba siye kwi-ins kunye nokuphuma kwendlela yokukhetha umrhwebi okwi-Intanethi, makhe sihlolisise ezinye zeefizi oya kuthi uzithathele ingqalelo xa usebenzisa ikhadi lakho ledebhithi. Qaphela, iifizi ezithile ziya kwahluka kwi-broker-to-broker, ke qiniseka ukujonga oku ngaphambi kokuvula i-akhawunti.
Imali yokuqala ekufuneka ujonge kuyo ingabizwa intlawulo yokusebenzisa ikhadi lebhanki. Ngokungafaniyo nekhadi letyala, umniki wakho wekhadi ledebhithi akazukuhlawulisa ngokusebenzisa ikhadi ukuthenga iBitcoin, njengoko isenziwa ngendlela efanayo nayo nayiphi na intengiselwano. Ngale nto ithethwayo, abanye abathengisi benkampani yesithathu baya kukuhlawulisa umrhumo wentengiselwano ngokusebenzisa ikhadi lakho lebhanki.
Ukuba bayakwenza, oku kuhlawuliswa njengepesenti xa kuthelekiswa nemali onqwenela ukuyifaka.
Umzekelo ophambili woku kutshintshiselwano oludumileyo lwe-cryptocurrency Coinbase – ngoku eneofisi yase-UK.
Iqonga lihlawulisa ngokumangalisayo i-3.99% xa usebenzisa ikhadi lebhanki.
Ke, ukuba ubuya kuthenga i-Bitcoin eyi- $ 1,000 39.99, ungagcina uhlawule i- $ XNUMX kwimirhumo yedipozithi.
Kwaye ngaphambi kokuba ufike kwikhomishini yokuthengisa yeqonga kwaye sasaza!
Kungenxa yoko le nto singacebisa ukubambelela kumrhwebi ekuvumela ukuba ubeke imali kwikhadi ledebit simahla. Ngapha koko, bonke abathengisi abacetyiswayo kweli phepha benza kanye loo nto.
Imali elandelayo ekufuneka uyithathele ingqalelo yile yekhomishini yorhwebo yeqonga. Ngamafutshane, le yikhomishini ehlawuliswa ngumthengisi kwi-cryptocurrency xa ubeka urhwebo.
Oku kukwabonakaliswe njengepesenti, kuphela ngeli xesha xa kuthelekiswa nemali onqwenela ukuyithengisa. Ngapha koko, kuyakufuneka uhlawule le mali kuzo zombini iziphelo zorhwebo- oko kuthetha ukuba uya kuhlawuliswa xa ufaka iodolo yokuthenga kwaye umyalelo wokuthengisa.
I-Coinbase ihlawula umrhumo wokurhweba we-1.5%.
Ukuba ubufuna ukuthenga i-£1,000 yexabiso leBitcoin, ubuya kuhlawula ikhomishini ye-£15.
Oku kuya kukushiya nge-985 yeedola kuphela zeBitcoin.
Kwiinyanga ezimbalwa kamva, i-Bitcoin yakho ngoku ixabisa i-£ 1,500, ngoko uthatha isigqibo sokwenza imali kwingeniso yakho.
Kwikhomishini ye-1.5%, i-£ 1,500 yakho ithengisa i-odolo yesiphumo kwintlawulo ye-£ 22.50.
Kwakhona, uninzi lwabarhwebi beBitcoin esidwelise kweli phepha likuvumela ukuba uthengise imali ye-imali ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini. Endaweni yoko, ekuphela kwentlawulo ekufuneka uyithathele ingqalelo kukusasazeka-esikuchaza kwicandelo elilandelayo.
Nokuba utyala imali kwizitokhwe kunye nezabelo, iimpahla, ETFs, okanye i-indices - uya kuhlala uhlawula umrhumo ongathanga ngqo owaziwa ngokuba kukusasazeka. Ukuthenga i-Bitcoin akufani. Kwabo bangaziyo, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye nexabiso 'lokuthengisa' le-asethi.
Lo msantsa kumaxabiso yindlela abathengisi abaqinisekisa ngayo ukuba bahlala besenza imali-nokuba yeyiphi na indlela yentengiso.
Kwimeko yokuthenga i-Bitcoin, i sasaza ibalulekile njengoko ikubeka ngokukhawuleza kwimeko yeLayman, kufuneka wenze iinzuzo ezilingana nokusabalalisa nje ukophula. Ngaloo ndlela, ukuphakama kokusasazeka, kunzima ukuba wenze imali.
Ixabiso lokwenyani lemarike yeBitcoin yi-7,000 yeedola.
Umthengisi unikezela ngexabiso 'lokuthenga' le-£6,860.
Ixabiso 'lokuthengisa' lifikelela kwi-£7,140.
Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini ngokuchasene nexabiso lemarike yi-£ 140.
Oku kufikelela kwi-2%, oku kuthetha ukuba ukusasazeka yi-2%.
Ke, ukuba ubuya kuthenga i-Bitcoin eyi- $ 2,000 exabiso kwi-broker ehlawulisa ukusasazeka kwe-2%, kuya kufuneka wenze inzuzo ubuncinci eyi-2% ukuze nje uphule. Ngamanye amagama, ukuba uthenge i-Bitcoin kwaye kwangoko uthathe isigqibo sokuyithengisa, uya kuphulukana ne-2%.
Ukuba ujonge ukuthenga iBitcoin ngekhadi ledebhithi, kukho ithuba elihle lokuba uyakwenza oko kuba ucinga ukuba kuya kuba ngaphezulu kwixesha elizayo. Ngapha koko, sesona sizathu siphambili sokuba abantu batyale imali kwi-Bitcoin, njengoko ukuvumelana ngokubanzi kukuba imali yedijithali isabalulekile qhekeza kubuchule bayo bexesha elide.
Xa kuthethwa oko, kufuneka ucinge ngendlela oceba ngayo ukugcina i-Bitcoin yakho ikhuselekile. Eli linqanaba lenkqubo yotyalo mali ehlala ibeka abatyali zimali abatsha, hayi kancinci kuba iBitcoin iphantsi - oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uthathe uxanduva olupheleleyo lwemali yakho.
Le yinkqubo ngokubanzi efunekayo ukuthenga nokugcina iBitcoin:
Thenga i-Bitcoin kumthengisi we-intanethi.
Khuphela i-wallet yedijithali yeBitcoin.
Emva koko, rhoxisa i-Bitcoin kwi-broker ngokufaka idilesi ye-wallet ekhethekileyo (ngokuqhelekileyo i-36 alpha-numeric characters).
Imizuzu eli-10 kamva, i-Bitcoin ifika kwi-wallet yakho yedijithali.
I-Bitcoin ihlala kwi-wallet yakho de ugqibe ekubeni ufuna ukuyithengisa.
Emva koko kufuneka udlulisele imali kwi-broker kwaye uyitshintshe ngemali.
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, inkqubo yokuthenga, ukurhoxisa, ukugcina, kwaye emva koko uthengise iBitcoin yakho ayinzima nje kuphela kodwa idla ixesha elininzi. Ngaphezu koko, kwaye mhlawumbi okona kubaluleke kakhulu - ukuba i-wallet yakho yedijithali igqekeziwe - okanye wenze impazamo ngokufaka idilesi ye-wallet engalunganga - i-Bitcoin yakho iya kuhamba ngonaphakade.
Kungenxa yoko le nto ucebise ngcono ukuba uthenge i-Bitcoin ngomrhwebi olawulwa kwi-Intanethi. Ngokwenza njalo, akukho mfuneko yokurhoxisa iingqekembe zakho ngaphandle, kwaye akukho mfuneko yokuba ukhathazeke ngokugcina. Endaweni yokuba utyalomali lwakho luhlale kwiqonga elilawulwayo ixesha elide unqwenela ukuligcina apho.
Ukuhlawula imali yakho kwi-Bitcoin Investment kwikhadi ledebhithi
Njengoko sele kutshiwo apha ngasentla, ayisiyiyo kuphela inkqubo yokurhoxisa kunye nokugcina i-Bitcoin yakho kwisipaji sangasese esigcwele umngcipheko, kodwa yinto enkulu xa kufikwa ekufumaneni imali oyityalayo. Nangona kunjalo, ngokusebenzisa umrhwebi olawulwayo onika ukhuseleko kumgangatho wamaziko, inkqubo yokuphuma kwemali ayinakuba lula.
Nanku umzekelo wendlela inkqubo eza kusebenza ngayo xa usebenzisa ikhadi ledebithi.
Uthenga i-£ 1,000 yexabiso le-Bitcoin kumthengisi olawulwayo, ongenayo ikhomishini ye-CFD.
I-Bitcoin ihlala kwi-akhawunti yakho ye-brokerage.
Kwiinyanga ezili-12 kamva, i-Bitcoin ixabisa i-60% ngaphezulu kwexabiso olihlawuleleyo, ngoko uthatha isigqibo sokukhupha utyalo-mali lwakho.
Ngokubeka iodolo 'yokuthengisa', i-Bitcoin yakho iguqulwa kwangoko ibe yimali yelizwe lokwenyani (iiponti, iidola, ii-euro, njl.njl.) ngaphandle kwekhomishini.
Emva koko ucela ukurhoxiswa kwakhona kwikhadi lakho lebhanki.
Iimali zifika kwikhadi lakho lokubambisa emva kweentsuku ezi-1-3 zokusebenza.
Njengoko ubona kumzekelo ongentla, enye yeenzuzo ezixhaphakileyo zokusebenzisa umthengisi weCFD olawulayo kukuba uya kuba nakho ukwenza imali kutyalo-mali lweBitcoin ngokucofa nje iqhosha.
Ukukhetha uMrhwebi ukuze athenge iBitcoin ngeKhadi lokuTsala
Ke ngoku ekubeni uyazi i-ins kunye nokuphuma kwento efunekayo ukuthenga iBitcoin ngekhadi ledebhithi, ngoku siza kuthetha ngenkqubo yokukhetha umrhwebi okwi-Intanethi. Ayisiyonto elula le, ngaba ngoku kukho uninzi lwabarhwebi beBitcoin abakuvumela ukuba wenze utyalomali ngemali-yokwenyani yehlabathi.
Phawula: Ukuba awunalo ixesha lokuphanda nge-Bitcoin broker kwisiseko se-DIY, siyakucebisa ukuba ujonge amaqonga amahlanu esiwacebise emazantsi eli phepha..
Ngobuninzi be Bitcoin ishishini elisebenza ngendlela engalawulwayo, oku kwenza inkqubo yotyalo-mali ibe yingozi. Okubaluleke kakhulu, awuyi kuba nandawo yokujika xa umthengisi ebandakanyeka kwisenzo esigwenxa.
Ngaloo ndlela, kufuneka usebenzise kuphela umthengisi ofumana ilayisenisi yokulawula. Kuninzi lwamatyala, oku kuya kuba kunye neqela elinye elinelayisenisi efana neFCA (UK), ASIC (Ostreliya), okanye CySEC (Sayiprasi).
Ngapha koko, abanye babarhwebi abadweliswe kweli phepha babamba iilayisensi kunye multiple imizimba yolawulo.
✔️ Amakhadi okuTsala axhaswayo
Nangona umrhwebi enokubamba idipozithi yamakhadi etyala, kusafuneka ujonge ukuba ikhadi lakho elithile lixhaswe na.
Umzekelo, sidibene nabarhwebi abakwi-Intanethi abamkela iVisa, kodwa hayi iMasterCard.
Eli nyathelo libaluleke kakhulu ukuba usebenzisa ikhadi elikhutshwe nguMaestro okanye AMEX, njengoko inkxaso ixhaphake kakhulu xa kuthelekiswa neVisa okanye MasterCard.
Kubaluleke kakhulu ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo ngesakhiwo semirhumo esiqeshwe ngumrhwebi. Njengoko besigqibe ngaphambili kwisikhokelo sethu, abanye abathengisi babiza intlawulo yokuthenga kwiidipozithi zamakhadi etyala.
Ngaphaya koko, kuya kufuneka uphonononge ukuba ngaba umrhwebi akahlawulisi iikhomishini zorhwebo. Uninzi lwabarhwebi abadweliswe kweli phepha likuvumela ukuba uthengise ngaphandle kwekhomishini.
Ngaphezulu kwemirhumo yedipozithi kunye neekhomishini zorhwebo, kuya kufuneka uphinde uphonononge ukhuphiswano lomrhwebi kwisebe elisasazekileyo. Oku kunokwenza wonke umahluko xa utyala imali kwi-Bitcoin-ngakumbi ukuba ucwangcisa ukubandakanyeka kurhwebo lwexesha elifutshane.
Kungenxa yokuba i-broker oyikhethileyo inelayisenisi yokulawula, oku akuthethi ukuba ulawulo lwayo lokhuseleko luseza kuqalwa. Oku kubalulekile, njengoko uya kufuna ukuqinisekisa ukuba i-akhawunti yakho yotyalo-mali ihlala ikhuselekile ngamaxesha onke.
Ngaphambili koku kukho umthengisi we-cryptocurrency osebenzisa ukhuseleko lwezinga leziko. Oku kubandakanya ukuthandwa kwezinto ezimbini-ezifuna ukuba ufake ikhowudi eyodwa ethunyelwa kwifowuni yakho ngalo lonke ixesha ungena kwiakhawunti yakho.
Sikwalindele ukuba iwebhusayithi yomthengisi ibe nokubethela kwe-SSL. Oku kuqinisekisa ukuba idatha yakho yobuqu ayifikeleli kwizandla ezingezizo.
Nangona uninzi lwenu lunokukhangela ukuthenga i-Bitcoin ngekhadi le-debit ngenjongo yodwa yokubamba utyalo-mali lwakho kwixesha elide, abanye benu banokujonga umdlalo wexesha elifutshane.
Ukuba kunjalo, kwaye ujonge ukusebenzisa ubungakanani kurhwebo lwakho, qiniseka ukuba ujonga ukuba umthengisi uyakuxhasa oku. Ungalibali, ukuba uhlala e-UK kwaye awuthathwa njengomrhwebi oqeqeshiweyo, uya kubanjwa ukuze usebenzise i-2: 1 kwii-cryptocurrensets.
Ngaphezulu kokunyusa, unokuba nomdla kwintengiso emfutshane ye-Bitcoin. Ukuba kunjalo, oku kuthetha ukuba ucinga ukuba ixabiso liza kuhla. Ekugqibeleni, kuyakufuneka usebenzise i-CFD broker elawulwayo ukuba amandla kunye / okanye ukuthengisa okufutshane yinto oyilandelayo.
Kukwabalulekile ukusebenzisa i-Bitcoin broker enikezela ngenkxaso ephezulu. Oku kuhlala kuza ngohlobo lwengxoxo ebukhoma okanye i-imeyile, nangona abanye abathengisi bakwabonelela ngomnxeba wokuxhasa umnxeba.
Ukongeza, qiniseka ukujonga ukuba zeziphi iiyure kunye neentsuku amaqela enkonzo yabathengi. Umgangatho womzi mveliso yi-24/5, intsingiselo yenkxaso ayifumaneki ngeempelaveki.
Ungayithenga njani iBitcoin ngeKhadi lokuTsala
Inyathelo loku-1: Khetha uMrhwebi oxhasa amakhadi etyala
Izibuko lakho lokuqala lokutsalela umnxeba iya kuba kukukhetha umrhwebi okwi-intanethi oxhasa idipozithi yamakhadi etyala kunye notsalo. Ngokweli candelo lingasentla, ngoku unezixhobo ezifunekayo zokufumana umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho.
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda umrhwebi ngokwakho, uya kufumana i-Bitcoin brokers zethu ezintlanu eziphezulu ezibhalwe emazantsi ephepha. Umrhwebi ngamnye unegama elihle kwi yorhwebo ntengiso isithuba, ke imali yakho ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
Njengoko uza kusebenzisa umrhwebi olawulwayo, uya kucelwa ukuba uvule iakhawunti. Inkqubo ayifane ithathe ngaphezulu kwemizuzu embalwa kwaye ifuna ulwazi olusisiseko lomntu.
Uya kucelwa ukuba uqinisekise isazisi sakho. Uninzi lwabarhwebi abadweliswe kweli phepha likuvumela ukuba wenze oku ngendlela ezenzekelayo. Mane ulayishe ikopi ecacileyo yesazisi esikhutshwe ngurhulumente (ipasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba) kwaye le nkqubo kufuneka iqinisekise kwangoko.
Inyathelo lesi-3: Sebenzisa ikhadi lakho lokuTsala imali kwiDeposithi Fund
Nje ukuba i-ID yakho iqinisekiswe, uya kuba nakho ukuhlawula iimali ezithile kwikhadi lakho ledebithi. Intloko ngaphaya kwiphepha lebhanki lomthengisi omkhethileyo kwaye ukhethe ukhetho lwekhadi ledebhithi.
Emva koko faka iinombolo ezili-16 ngaphambili ekhadini lakho, kunye nomhla wokuphelelwa kwayo kunye neCVV. Ngenisa imali onqwenela ukuyifaka kwimali yendawo yakho kwaye uqinisekise ukuthengiselana.
Ngoku ukuba iakhawunti yakho yomrhwebi ixhaswa, ungaqhubeka uthenge iBitcoin. Intloko ngaphaya kwecandelo le-cryptocurrency yesiza kwaye ujonge iBitcoin. Qaphela, uninzi lwabarhwebi baya kuba nexabiso ngeBitcoin kwiidola zaseMelika, kuba oku kuyimigangatho yomzi mveliso.
Ngenisa inani leBitcoin onqwenela ukulithenga, emva koko uqinisekise iodolo yakho. Ukuba ujonge ukubeka urhwebo olunobunkunkqele- njengokufaka amandla okanye ukuthengisa okufutshane, faka iimfuno zakho ngaphambi kokuqinisekisa iodolo yakho.
Abarhwebi abahlanu abaphezulu bokuthenga iBitcoin ngeKhadi lokuTsala
Ukuba unomdla wokuthenga i-Bitcoin ngekhadi ledebhithi, kodwa awuqinisekanga ukuba ngowuphi umrhwebi yokwenza oku kunye naye, jonga ezi ngcebiso zethu zintlanu zingezantsi.
Njengoko igama libonisa, i-EuropeFX yingcali ye-forex broker. Oko kuthethiweyo, iqonga likwaxhasa iiCFD ngendlela yezabelo, i-indices, cryptocurrencies, kunye nempahla. Uya kuba nakho ukurhweba ngeMT4, ngoko ke unokukhetha kwisoftware yedesktop okanye isicelo esiphathwayo/sethebhulethi. Ukuba ufuna ukurhweba ngesikhangeli sakho sewebhu esisemgangathweni, umthengisi ukwabonelela ngeqonga lakhe lemveli-I-EuroTrader 2.0. Ngokwemirhumo, i-EuropeFX ibonelela ngokusasazwa okuqinileyo kwizibini eziphambili. Imali yakho ikhuselekile ngawo onke amaxesha, hayi ubuncinci kuba umthengisi ugunyazisiwe kwaye unelayisensi yiCySEC.
Siyathemba ukuba ngokufunda isikhokelo sethu ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, ngoku unokuqonda kakuhle ukuba kuthatha ntoni ukuthenga iBitcoin ngekhadi ledebhithi. Njengoko uyazi ngoku, inkqubo ayinakuba lula. Vula iakhawunti, layisha i-ID ethile, faka iinkcukacha zekhadi lakho lokuthenga kwaye yiyo loo nto-uthenge iBitcoin kwimizuzu engaphantsi kwe-10.
Nangona kunjalo, elona candelo licelomngeni kule nkqubo kukufumana umthengisi ohlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho. Njengoko sixoxe ngokubanzi, kuya kufuneka ujonge iimetrikhi ezingqonge umgaqo, iikhomishini, iifizi zedipozithi, inkxaso kubathengi, kunye nokunye.
Ukukunceda apha endleleni, sidwelise abathengisi bethu abaphezulu abahlanu abakuvumela ukuba uthenge iBitcoin ngekhadi ledebithi. Oku kukugcinela ingxaki yokuba wenze uphando lwakho olunzulu, njengoko onke amaqonga ethu acetyiswayo ahlolwe kwangaphambili.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uthenge iBitcoin ngekhadi ledebhithi elihlawulelwe kwangaphambili?
Ewe, okoko nje umrhwebi exhasa umnikeli wekhadi (iVisa, i-MasterCard, njl. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ujonge ukuba ngaba ukurhoxiswa kungenziwa kwakhona kwikhadi.
Yeyiphi eyona dipozithi iphantsi xa usebenzisa ikhadi ledebithi ukuthenga iBitcoin?
Oku kuyokwahluka kuxhomekeke kumrhwebi oyisebenzisayo. Oku kuhlala kuhlala ngaphakathi kwe- $ 50- £ 100 uluhlu, nangona kunjalo, qiniseka ukujonga oku ngaphambi kokuvula iakhawunti
Kutheni le nto kufuneka ndifake i-ID ukuze ndithenge iBitcoin ngekhadi ledebhithi?
Ukuze uhlale uhambelana nomnikezeli welayisenisi, i-Bitcoin brokers elawulwayo kufuneka iqinisekise ngamnye umsebenzisi obhalisela indawo yakhe.
Zeziphi iifizi zedipozithi ekufuneka ndizibhatale xa ndisebenzisa ikhadi ledebithi ukuthenga iBitcoin?
Ukuba kuhlawuliswa umrhumo wedipozithi, uhlala ubizwa njengepesenti xa uthelekisa nexabiso lokuthenga kwakho. Ngale nto ithethwayo, iimfumba zabarhwebi zikuvumela ukuba ubeke imali kwikhadi lokutsalela simahla.
Ngaba ibhanki yam iya kundivumela ukuba ndisebenzise ikhadi lam lebhanki ukuthenga iBitcoin?
Kuya kufuneka ungakhange ukhuphe usebenzisa ikhadi lakho ledebithi ukuthenga iBitcoin-ngakumbi ukuba usebenzisa i-broker elawulwayo.
Ewe, nangona usebenzisa ikhadi lokutsala imali xa ufaka imali kwi-broker oyikhethileyo, kuya kufuneka uyirhoxise inzuzo yakho uyibuyisele kwakweli khadi. Oku kukoyisa izoyikiso zokuxhaphaza imali.
Ukuba ufuna ukusebenzisa ikhadi lakho lokutsalela kwi-Bitcoin emfutshane, kuyakufuneka usebenzise i-CFD broker elawulwayo. Kukho amakhulu asebenzayo kwindawo yase-UK, ke khetha ngobulumko.